Badhasaabka Awdal C/Raxmaan Nuur Sugaal iyo Sanad Guurada 21aad Ee Somaliland « HiilDan.Com
Home › Warka (News) › Badhasaabka Awdal C/Raxmaan Nuur Sugaal iyo Sanad Guurada 21aad Ee Somaliland
Badhasaabka Awdal C/Raxmaan Nuur Sugaal iyo Sanad Guurada 21aad Ee Somaliland By hiildan on May 8, 2012	• ( 22 )
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Boqor Allaale Oo Martiqaaday Ugaas MustafeSomaliland Iyo Djibouti: Ma Waxay Isu Furteen Xuduudkii Xeebaha Labada Dal? »Categories: Warka (News)	Related Articles
hiildan	May 8, 2012 • 07:46	Mahadsanid Hodan Abukar Caafi, Alleylehe suxufibaa ku dhalay.
Reply ↓	Darbi Samaroon	May 8, 2012 • 08:46	MAXAD CASOOW biyaha Burdi caba si sixirka Ciisaha idiinka rogmado biyaha Burdi waa sawo waana biyo barakaysan oo ka dawo ah sixirka,isha iyo baabka,Ninkan Cabdiraxmaan Nuur Sugaal ma Ciisaa….? Waxaad ku sheegtaan Gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal oo waxaan maqlay inuu Ciise Waraabe yahay markaa Ciise Waraabe wuu idin sixray Maxad-Casoow oo Djabouti ayuu idinka qaatay oo waad kasoo baxsateen oo Xeeb ayaad soo dagteen way idinka daba yimaadeen oo way idinka faro maroojiyeen waad kasoo baxsateen oo Borama ayaad orodkii kusoo gasheen way idinka daba yimaadeen oo JY ayaad leedihiin waxaad tihiin Ethiopian idinkoo Ciise kasoo cararay dhulkii oo dhana usoo faariqiyay ayaad oonaysaan inaad waliba ka eryataan JY Borama adeer waatan aad maanta ledihiin gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal nin Ciise ah ayaa hadlaaya oo Borama xilka kahaya ceebeey tacaal hadaad Ciise keenteen Borama Dilana waad kusoo wadaan way idiin dhamaatay anaguna ceebtaasi eegan mayno hada laga bilaabo ee waa in aan Burdi ini geeyo.
Maxad Casoow waad sixrantihiine adeer Burdi aan taandhooyin iyo guryo ku meel gaadh ah aan idiinka dhiso si ad biyaha Burdi u cabtaan oo sixirka Ciise idiinka rogmado walaahi waa ka bas tolkay Maxad Case way u dhamaatay ee haloo gurmado Samaroonoow
Reply ↓	shukri maxamed warsame	May 10, 2012 • 20:11	KKKKKK!!!!!!!DARBI SAMAROONOW WAD IGA QOSLISEEY WALAHI ILA”HAJIGAYGA”OO MAXAD CASE AAH AYA QOSLEY!!!!HILDANOOW DEE DARBI SAMAROON WA KA INI SHEEGAY RUNTIIKKKKKKKKKKK
Reply ↓	Ali-Durgiye	May 8, 2012 • 09:23	badhasaabka gobolka awdal kulahaaa wooooooow waxay naga maqamba love duqa tuulada Dila waa Ali-Durgiye maxaa iiga shan iyo toban ah BIDAAR taqaluf leh sancaa ku xayraamay.
Reply ↓	Aisha	May 8, 2012 • 10:34	Ali waad iga qoslisay gadabuursigu afkay kayihiin cunsuri laakiin uurkoodu waa dadka ugu qanisan masamaynayno sidaad jabuuti kusamaysaan wiilka reer jabuuti awaw ilaa ka awaw een waligii awdal arag ad ugu xaqirtaan eed tidhaahdaan dalkaagii majoogtit shaqada soo baxdana wiilka ciisaa xaq uleh.taasna waxakuu cadaynaaya wiilkaa cabdi nuur. takale waxaan ognahay wiilkani waa muwaadin kudhashay gobolkan xataa haduuna ehelkiisu degin. kudarsoo madiidanin qof kule waan kulaleehay dhulka lakiin waxaan diidnaa waan kaaleehay dhulka. teeda kale waxa cabsida nageliyey markaad magaaladii jabuuti ee badabuursi aasaasay naga tirtirteen waxaaban kabaqnay inaad awdala nagaga hadhiwaydaan waana taatakeentay cabaaadka iyo ciisaa nadhacaayada
Reply ↓	hiildan	May 8, 2012 • 10:40	Gadabuursi waa Gob ku dayasho mudan.
Reply ↓	Ali-Durgiye	May 8, 2012 • 12:03	Aisha Luulay heeedheeeee,
Raga ciisa waraabe ilaahayba awdal ku beeray inta ugu baaxadweyn, cidna marti uga noqon maayaan wiilkan aad abtiga u tihiin hadaad badhsaab ku xigeen ka dhigteen dee maaha diiqo ee wuxuu mudna intaa wax ka buuran laakiin maadaama u gedabuursi isba wax buuran maanta haysan sadkan weyda ah waxaan u qaadanay wixii la odhan jiray;TAGOOG NIN KU SIIYAY HANA UGA TAGIN HANA UGU TUDHIN:
Djiboutina in awdal lala simo waa gef ee gar maaha sababto ah reerkan samarron waxay dalka Djibouti ka degaan xaafada quartier5 oo qiyaasti ku fadhida dhul ka yar 1,3km saamiga iyo sadka ay ku haystaana waligood kuma yeelaan soomaaliweyn,somaliland iyo kililka5aad intaba marka reer abtoow maad ilaahay ku shudridaan laga yaabo in maalin uun ciise yidhaahdo canfaray xilka dalka naga qabo ka dibna ay canfartu xaga iyo Boorama farta nigu fiiqan ciisana gawska hoostiisa ka qoslo.
Reply ↓	godan	May 8, 2012 • 12:23	Tagoogtu waa iska cad quudheed,anigu markaan neefka hilibka soo iibsho een qaybinayo tagoogta bisadaan u tuuraa wax la cuno ma le waliba haduu neefku wayd yahay.
Cali oday halkaa ka wad murtida iyo maahmaahaha soomaaliga waaban sii ilaawayna beryahan danbe.
Reply ↓	Aisha	May 8, 2012 • 12:37	waar cali show coonbaadtahay waxaaban kuu haystay raga reeruhu markay isku murgaan la raadinlahaaye ma diiqayna ahayn ina nuursugaal oo g/kuxigeen awdal loogadhigay xaguukasoogalay een ahayn abti waan garankaraa ninka reer geedi ee xariirad xaq igula sheegta iyo ninka mamaasan ee geerisa sed igula qaybsada laakiin yarkani waa caliguran idikuba dafirteen aabihii naman ahayna kuma arag awdal sideebuu kuhelay oon ahan maahmaahdii ahay gabaduursi hakadhalane dhexjoog oo micnaheedu yahay waxay u roonyihiin dadka ku dhexnool
Reply ↓	Aisha	May 8, 2012 • 12:40	ta jabuutina dee waxaa jiray wakhti ciisuhu xaafadna buuxin jirin lakiin maanta oola iniiga yaacay ha iisheegin anu umaba haysto xataa inay xaafad buuxiyaan gadabuursiga jabuutijoogi waayo way idiinka qexeen markaad cidhiidhi geliseen.
Reply ↓	Ali-Durgiye	May 8, 2012 • 13:05	waar cali show coon baad tahay, kkkkkkkkkkkkkkkk hiiiiiiiiiiiiiiiiiii aar yaa ii sheegay sawta ii qabatay maanta uun
Reply ↓	godan	May 8, 2012 • 13:34	U hiili Afkaaga Hooyo
Afka lagu arko qaar ka mida astaamahan waxay af yaqaanadu ku tilmaamen inuu halis ku jiro 1 dhimashada erayada loo yaqaan erey saleedyada
2 Fatahaada erayada shisheeye oo layska moosi waayo
3 Dadka oo afkooda qiimayn waaya kana door bida isticmaalida afafka shisheeye
4maamul adeegsada ama ilaaliya ama horumariya oo la waayo sida inagu dhacday
5 Barashada afkaa oo hoos u dhacda iyadoo loo arko inaan waxba lagu dheefayn
6dadka oo abaar ama dagaalo ugu qaxa dhul shisheeye oo af kale lagaga hadlo sida i haysata anigan iyo inteena badanba
Cali oday maah maahdaas aad dusha ku qortay ayaa fikradan igu dhalisay waxanan wiigii mar soo qaadan doonaa xoogaa suugaan
Reply ↓	godan	May 8, 2012 • 13:37	Lixdaas qodob ee kor ku xusana markaad u fiirsataan afkeena way ka muuqata kuna wada dhecday taasina waxay inoo cadaynaysa in af soomaaligu halis ku jiro ……..
Reply ↓	Marunbaa	May 8, 2012 • 15:47	Durkiye yoow Canfartu waa dad abaalka iyo ujeedada dantooda yaqaan. Hadii aanad dafiraadii wajiga bira lahayd meesha la soo fadhiyin Canfar markii la cadaadshay ee ciise iyo faransiis isku raacay iyadoo lagu eryanayo suldaankoodii Abuukar ee france, ciise iyo cusuriyada Ethiopia u jilib dhigay u jilib dhigay in xitaa djibouti lagu sooo rogay in ay visa ku soo galaan. Ragii u dagaalamay Gadabuursi ayay ahaayeen ilayn Somali inta kale meel fog wax kama arkaane marka reerkan inuu hoos u jeedo laga reebo. Miyaanu ahayn Senetor Jamac saylici ninkii sharcigii gudaafada ku tuuray. Canfari abaal aanay ilaawayn bay gadabuursi u hayaan waxayna ogyahiin in djibouti iyo reerka Q5 degaa isku mid yihiin. Badhasaab ka Awdalna cid kagama haybaysan yaan cabsina ma haysee waa ciso ilaah umadiisa kala dheeraysiiyey laakiiin maalintay waysadu ka jabto sidiina ragbay ilmadu kuraamaha gaadhi doontaa waxana ka mida gabaygii Dumis samaroon shalay soo qoray ee Ugaas Nuur.
Reply ↓	HaniMuufo	May 8, 2012 • 16:43	Ali-Durgiye,
Dadku yuusan kaa toocsane shib iska dheh Somali waa dadka ugu dhul wayn africa uguna tirada yar. Irir Samaale dhulkiisu ilaa Ethiopia, Kenya Djabouti ayuu ku fadhiyaa. Reerkan dhulna kaama kicin karaan dhulna kuma siin karaan. Dhulku waa gegi cidlo ah kii ayaamo joogjoogo ayaana iska leh ee ku manaafacaadsada. Teeda kale waa ku mahadsantahay saad Derbi Siloon u riftay oo uu olia da iyo biyaha ba usugu daray kkkkk.
Reply ↓	xasan	May 8, 2012 • 22:17	hortaa samaroon iyo isaaq ayaa ku awood badan djibouti ama ku mansbyo badan bal suaashaas ayaanu dad badan isku qabsanee iga dhergiya asxaabay idinkaa iiga waroone
Reply ↓	satawe44	May 8, 2012 • 22:29	dhlinyarada kaftan wadaaga badaneey waad salaamantihiin
cali durgiye horaan u sheegay waa ninkii ciise ugu
kaftanka badnaa waa rag yaqaan waa dhul yaqaan,waliba
waa oodwadaag caro samaroon ku koray,ku barbaaray,sidan
filayo waliba ay reer abti u yihiin reer dudub ama b/celi
caliyaw sidaad rabtaba udhe CIISE CARO SAMAROON MARTI
buu ku yahay kuna ahaan doonaa,waana taariikh soo jireena
waliba intaad joogtaayi waa maalmaha nabada iyo abtinimadu
shaqaynayso XARIIRAD iyo taariikhdeeda inyar aan kaaga taabto hadaad isleedahay ciisaa leh ,
xariirad waa xarunta kulmisa b/celi iyo reer dudub ciisana
abtinimada reer dudub ayuu ku yimid,odaygii ugu horeeyay
wuxuu ahaa AADAN BILE WAXAA KA ERYEY miicaad alaale
waxaa maalintaa u baryey oday b/celi ah lana odhan jiray
nuur wayne taariikhda inta kale maanta kamahadlayo.
Reply ↓	Marunbaa	May 9, 2012 • 03:12	Satawe xariirad sharaxaya. Mise magacan baa galbeedna jira.1991 kii wixii ka horeeyey Durkiye uma tirsano markaa taariikh da waxba ha ku daalin Satawe waana sida ayna taariikhdu ugu tirsanayn 77 kii wixii ka horeeyey djibouti. Waxanse kuu ogahay, Durkiye la aantii sirta jaarkeena maynu fahaneen.
Reply ↓	HaniMuufo	May 9, 2012 • 05:03	Marunbaa,
Suaal waxaad Wanlewayn ku tilmantaa dad xun oo shaydamo ah marwalbo. Laakin sidee bay ku dhacday adoo Ciise haysta?. Inagu dhul kulma dagaalno nin Somali ah waxaadna taa ka garanaysa kolkaad ku soo qaxdeen dhulka Wanlewayn ilaa 1960-1990 Somaliyoo idil aad barwaaqada dhulka Wanlaweyn intaad la yaabteen carigu Somaliyeed oo dhan la soo faaruqiye ee leysugu yiimid Koonfurta. Ma cid idin waydiisaad aragteen maxaa halkan ka soo doonteen?. Waa iga wale waxaan xusuustaa Isaaq oo dagaal Siyaad Bare la galay oo intuu Muqdisho yimi hadana dadki kala jaad jaadka ahaa ee reer Muqdisho aflagaado iyo dagaal ula taagan. Oo aan waliba leenahay iska daaya kuwaan dhulkoodi ayaa laga soo gubay oo waa caraysanyihiine yaan lagu dayan. Malin waxaan xusuustaa naag cayaysa naag aay ugu yeereysay Nayaa Sankadhuudhi. Tii shanka dhuudhi lagu lahaana waay iska sii socotay xitaa dib uma jaleecan tan caayeysa. Waxaan xusuustaa Mareexaan oo isaqoo qoxooti ah yimi hadana daro kuwa Hollywood u eg dhisanayo cid inta kalarka ku dhegtay tiri war maxaad u dhisanaysaa iyo maxaa meesha ku keenay!. Waxa cajiib ah in aad kalarka ka haysataan dad aad Djabouti isla degtaan oo walaladiin ah xigtadiina ah. Dhul isaguba qarax ah oo wax ka baxayaa jirin una eg saxarihi galbeedka Africa cid degen oo rabtaana jirin. Malinwalbo ku eryo kuna dacayadeey rerguraa masaakin ah oo iska soo ambaday. War anuu ciisaha waxaan ba kula talinayaa in aay. Soo lugeyaan oo yimadaan wabiyada Shabeele. Cid ale iyo cid waydiinayso xitaa ma jiraan haday iyagoo raxan raxan ah yimadaan oo aay si nabad ah dhulkaa xoolohooda ku daaqsadaan. Taasina waa dhaqan lagu yaqaan reer Wanlewayn. Waligood Somalidu waa isugu Somali dacayada nalala daba taganyahayna. Waa mushkulo isla kuwa na dacayadeynayaahi nagu fureen. Laakin gobonimo hadii la yiraah dadka Gobolada dhexe ilaa Waqooyiga degaahi kunka sano ee soo socdaa xitaa sharaf iyo ilbaxnimo naguma gaarayaan. Marunbaa waxad marwalbo tiraahdaa nabadbaan haysanaa. Nabadiinu waa gacan ku rimis. Wax aad isku dagaashanna meeshaba ma yaalo oo waa meel qarax ah. Iyo afar is taqaan. Anagigu waxaan ku arkay Europa dad Muqdisho ku dhashay oo Ruush, Greeg, Italian, Chinees, Nagerian, iyo wadamo kale duwan ah oo xitaa calanka Blue ga ah madaxa ku xirto jacaylka aay u qabaan Muqdisho.
Reply ↓	Marunbaa	May 10, 2012 • 00:17	Hanimoofooy sheekadaada dheer ta u danbaysaan ku bilaabi. Calanka buluuga ah ee hore u casilmay anuu nusqusha aad istic maasho waxa ku jira ayuu igala qiimo xun yahay dana kama lihi jacayl na iima hayo oo heer aan koonfuri gaadhsiin iyo jacayl ayna waligood fahmayn baan u haynay laakiin imika waad aragtaa waxaan ku matalay waana iga run oo qiima ani iima leh laakiin hadaad jeceshahay aduu ku dhagsanow laakiin waxan kuu ogahay in aad wax dhaltaalan u heesto. Calanku qiimuu lahaa qiimahiina wuxuu dhacay markii shantii somaliya la waayey. Daarood baa kufsaday hawiyana wuu garciyey.
Reply ↓	Marunbaa	May 10, 2012 • 00:29	Hadaan sheekadaada kuugu noqdo reer waqoyi hadii uu koonfur deganaa nin cilmi ama wax soo saar ku soo biirshay somali buu ahaa inkastood reer kaliya sheegtay aanan ahayn laakiin inta koonfur joogta tobankeed baa waqooyi joogtay ii dhib maahee aan dheecaan soo galin dhulka. Reerka aan jaarka nahay waxan isku haysanaa uun wax noo dhaxeeya dhulkaad sheegtay ee kulaylka iyo kadeedka badana anakaa ku kalson ciisana waa wadanii oo rag gaajo la roora maaha. Waxase aanad ogay, reer awdal ficilka xun ee jiiraankuunbay ka jawaabaane dad doolaala taga maaha waxay ka qayl yayaana waa markii dhinac kasta lagaga soo durkay oy leeyahiin waar walaalayaal did iiga joogsada oo waliba lagula yaaban yahay. Waxase kuu ogahay koonfur dhul lala degaa in ay dhamaatay ood xayawaan noqoteen idinkii is diiranaya iska daa shisheeye idiin yimaadee. Haniyey, hagardaamadaad raxan wayn iyo dadka laga tirada badan yahay barteen marlay indhahaagaad ku soo aragtay anoo sheeko ku maqlayna waan ka argagaxay markaa indho adaygaaga ibnu aadam baad intaad wixiisa ka qaada teen waliba sidii dameeraha iyaka ugu rara teene hadii durkiye dhabarka kuu dhiganayo si aad biyaha wabiga ugu soo dhaansato,waa gartii Haniyeey wabiga isaga dhinac daji sidaad tidhi.
Reply ↓	Sahal	May 10, 2012 • 17:34	Cali,
Maxaa warmo kugu dhacaya mise kumaba soo gaadhayaan kkkkkkkkk anigu maalintay reer abtigay sidan ii weeraraan Darbi oo halkan taagan ayuunbaan iska noqdaa. Wali ileeen suji ma’ guuro kol uu suulka kaa galana waa halkii Haniye ileen Awwowbuu ii ahaaa.
Waxanse Caliyoow kuu sheegi reer abtigay afkooga laga maqlimaayo waxaa xaqbaa la iga qaatay ama la’ igaga heley ee wixii gacatooda kabaxaa waa diiq-abtinimo sida badhasaabyadan faraha badan dee taloow ana ma’ Baki baan badhasaab kkkkkkkkkkkkk Su’ aal aad habeen dhawayd i waydiisay oo aan waqti u waayey kuna saabsanayd Badhasaabka cusub ee Salal de Osman kaad sheegi hadduu yahay kii reer Garbo-Dadar maaha e kani sida la’ ii xaqiijiyey waa BUURTA MAAR-MAAR. Mana garan karo in uu yahay ninka aad aabihii sheegaysid iyo inkale.
Waxanse la’ yara yaabay Aisha oo u muuqata mid dadka iyo dhulkba kala taqaana oo haddana leh Cali- Guran dhulkaaba ma’ degaan. Habase ahaatee Cali iyo Geedi miyayna Aisha iskugu kaa mida ahayn mise Cali-Guran Hiildanbaa ka urinaysaa oo dhulka uga fogaynaysaa kkkkkkkkkkk waa sidee habar-yar !!!!!!!!!!!!
Blog Stats	1,207,210 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)